लभमा पीएचडी र बोससँग डेटिङ जानेको जागीर पक्का ! | गृहपृष्ठ
Home र यो पनि लभमा पीएचडी र बोससँग डेटिङ जानेको जागीर पक्का !
on: June 07, 2018 र यो पनि
जागीर दिन कम्पनीहरूले अनेक प्रलोभन दिने गरेका छन् । तर, अमेरिकाको एक कम्पनीको जागीरसम्बन्धी विज्ञापन देखेर भने जोकोहीलाई पनि आश्चर्य लाग्न सक्छ । यदि तपाईलाई कसैले जागीर पाउन बोससँग डेटिङ जानुपर्छ भने कस्तो लाग्छ ? पक्कै पनि तपाईलाई यो ‘सेक्सिष्ट’ लाग्न सक्छ । तर, अमेरिकाको एक कम्पनीले यस्तै प्रस्ताव पेश गरेको छ तर यसमा हल्का ट्वीष्ट छ ।
अमेरिकी डेटिङ एप्लिकेशन हिञ्जले यस्तै प्रस्ताव पेश गरेको हो । कम्पनीले पितृसत्तात्मक सत्तालाई बढावा दिन नभई उम्मेदवारलाई एक अभ्यास गराउन यस्तो गरेको बताएको छ । जागीरमा छनोट हुनेले ८० हजारदेखि १ लाख डलरसम्म तलब पाउने बताइएको छ । यसबाहेक कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई रेष्टुराँ र बार एलाउन्स पनि दिने बताइएको छ ।
कम्पनीमा जागीर खानेले बोससँग डेटिङमा जानुपर्ने र उसलाई जुन कामका लागि चुनिएको हो, बोससँग त्यो काम प्राक्टिकल रूपमा गरेर देखाउनुपर्ने कम्पनीको शर्त छ । यस्तो अन्तर्वार्ता ‘एण्टी रिटेन्सन स्पेशलिष्ट’ पदका लागि खोलिएको हो ।
डेटिङका बेला उम्मेदवारले यो भूमिका निर्वाह गरेर देखाउनुपर्ने र आफूले कतिसम्म राम्रोसँग संवाद गरेर देखाउन सकिन्छ भन्ने पनि प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । यति मात्र नभई जागीर पाउन उम्मेदवारसँग समाजशास्त्रमा पिएचडी वा प्रेम, यौन, सम्बन्ध र कम्युनिकेशन विषयमा रिसर्चको डिग्री हासिल गरेको हुनुपर्ने पनि कम्पनीको शर्त छ । यसका साथै उम्मेदवारसँग सञ्चारमाध्यममा काम गरेको अनुभव पनि थपिए सुनमा सुगन्ध हुने बताइएको छ । यो पदमा बसेर व्यक्तिले समस्याको समाधान निकाल्ने, डेट फिक्स गर्ने, डेटका लागि उपयुक्त स्थानको छनोट गर्ने र कम्युनिकेशन गराउने जस्ता काम गर्नुपर्छ । एजेन्सी